विश्वकप छनोट : आशा धेरै ! सम्भावना कम – onlinekhelkhabar.com
सलमान शाह	Posted on श्रावण २ २०७६, बिहीबार
शलमान शाह ( अनलाईन खेलखबर ) ।। सन् २०२२ मा एसियाली राष्ट कतारमा हुँने फिफा विश्वकपका लागि विश्वकप छनोटको खेल तालिका सार्बजनिक भएसँगै हाल पुन : माहोल फुटवलमय बन्दै गएको अवस्था छ ।
पहिलो पटक सिधै दोस्रो चरणमा छनोट भएको नेपाल एसिया दोस्रो चरणको छनोटमा समूह ‘बि ‘ रहेको छ । जहाँ नेपाल सहित अष्ट्रेलिया, जोर्डन, चाइनिज ताइपेइ र कुवेत रहेका छन । फिफा बरियतामा एसियाबाट ३४ औँ स्थानमा रहने टिमलाई यसपटक सिधै दोस्रो चरणको छनोट खेलाउँन लागिएको हो ।
नेपालले यस यात्राको सुरुवात सेप्टेबर ५ तारिखमा कुबेतबिरुद्द नेपालको घरेलु मैदानबाट हुनेछ ।
सौजन्य ; एन्फा
स्विडिस प्रशिक्षक योहान कालिनको प्रशिक्षणमा रहेको नेपालले अहिले विश्वकप छनोटका लागि भनेर लामो समय देखि आफ्नो तयारीमा जुटिरहेको छ । नेपाल यसपटक स्पष्ट सोचमा रहेको आंकलन गर्न सकिन्छ ।
कम्तिमा नेपालको सोच विश्वकपको तेस्रो चरण सम्म पुग्ने हुँनेछ । तर आशा धेरै छ सम्भावना कम ! यसो भन्दै गर्दै सम्भावना नभएको होईन छ ! तर त्यसका लागि नेपालले हालको खेल देखाएर पुग्दैन त्यसका लागि थप अतिरिक्त खेल प्रस्तुत गर्नेपर्छ ।
फुटबल हो जे पनि हुँन सक्छ । ईतिहास धेरै छ कमजोर मानिएका टिमले बलिया टिमलाई हराएका धेरै उदारण रहेका छन । त्यसलाई टिमले बोनसका रुपमा लिने गर्छन । त्यो भन्दा पनि आफ्नो तयारी आफैबाट गर्नु पर्ने हुन्छ । जति मेहनत गरिएको छ त्यसैको फल त अबश्य सबैले पाउँने गर्छन ।
Previous Postविश्वकपका खास खेलाडी : जसको प्रदर्शन शानदार रहयो !
Next Postविश्वकप छ्नोटका लागि नेपालको तयारी सकियो